Howlgalka nabadsugidda Midowga Afrika oo saldhigyo ku wareejiyay Suudaan | Star FM
Home Caalamka Howlgalka nabadsugidda Midowga Afrika oo saldhigyo ku wareejiyay Suudaan
Howlgalka nabadsugidda Midowga Afrika oo saldhigyo ku wareejiyay Suudaan
Qaramada midoobay iyo howlgalka nabad sugidda Midowga Afrika ayaa lagu soo warramayaa in ay dowladda Suudaan ku wareejiyeen 14 ka mid ah saldhigyada amniga ee ay adeegsanayeen.
Xarumahan ayaa ku yaalla gobolka Daarfuur ee wadankaasi waxayna isticmaalayeen muddo 13 sano ah.
Dowladda Suudaan ayaa hadda lagu wareejiyay si dadweynaha ay deegaan uga dhigtaan.
Saldhigyada lala wareegay ayaa lagu saleeyay heshiis dowladda Suudaan ay 4-tii bishii saddexaad ee sanadkan la saxiixatay qaramada midoobay iyo howlgalka nabadsugidda ee Midowga Afrika ee Daarfuur (UNAMID)
Sanadkii hore ayay ahayd markii golaha amniga ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa uu u codeeyay in wareejintan la sameeyo.
Previous articleMadasha wasaaradaha caafimaadka DFS iyo maamullada Soomaaliya oo furmay
Next articleQarax ka dhacay warshad ku taalla Thailand